အမကေို ခဈြတဲ့ သား…. – Shinyoon
အဲ့လိုသားမြိုးကို ရထားတဲ့ အမအေတှကျတော့ သိပျကို ကောငျးတဲ့ ဆုလာဒျပါ .. ဒါပမေယျ့ အဲ့လိုယောကျြားမြိုးကို ရထားတဲ့ မိနျးမအတှကျကတော့ တကယျ့ကို ၀ဋျကွှေးပါပဲ ။ သူက သိပျလိမ်မာတာ သိပျသိတတျတာ ဒါပမေယျ့ အိမျထောငျမှုတာဝနျဆိုတာကိုတော့ သူမသိတတျခဲ့ဘူး ။
ဇနီး နဲ့ သားကို ပဈပယျထားပွီးမှ ခဈြလို့ရတာမဟုတျဘူးလေ ။ နှဈဦးနှဈဖကျ မြှမြှတတလေး ခဈြတတျရငျတော့ ပိုပွီးကောငျးတာပေါ့ ။ အမကေို ခဈြတာဟာ အပွဈမဟုတျပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ ဇနီး ကိုယျ့သားသမီးကို မကျြကှယျပွုထားတာကတော့ သိပျကို ရကျစကျရာ ရောကျသှားပွီ ။
ဒီလိုယောကျြားမြိုးတှကေိုရတဲ့ မိနျးမတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ ဒူးနဲ့ မကျြရညျသုတျရတာမြားတယျ ။ အမကေို မခဈြနဲ့လို့ပွောပွနျရငျလဲ ကိုယျက လူဆိုးမကွီး ဖွဈဦးမယျ ။ ဒါပမေယျ့ မိသားစုကို သိပျပွီး တှယျတာတတျပွီး ကိုယျ့ဇနီးနဲ့ ကိုယျ့သားကို ပဈထားတာကြ ဘယျသူမှ မမွငျတတျကွဘူးလေ ။
အဲ့လိုသားမြိုးကို ရထားတဲ့ အမအေတှကျတော့ သိပျကို ကောငျးတဲ့ ဆုလာဒျပါ .. ဒါပမေယျ့ အဲ့လိုယောကျြားမြိုးကို ရထားတဲ့ မိနျးမအတှကျကတော့ တကယျ့ကို ၀ဋျကွှေးပါပဲ ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဒီလို ယောကျြားမြိုးကို ရှောငျစခေငျြတယျ ။
အမေကို ချစ်တဲ့ သား….
အဲ့လိုသားမျိုးကို ရထားတဲ့ အမေအတွက်တော့ သိပ်ကို ကောင်းတဲ့ ဆုလာဒ်ပါ .. ဒါပေမယ့် အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးကို ရထားတဲ့ မိန်းမအတွက်ကတော့ တကယ့်ကို ၀ဋ်ကြွေးပါပဲ ။ သူက သိပ်လိမ္မာတာ သိပ်သိတတ်တာ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်မှုတာဝန်ဆိုတာကိုတော့ သူမသိတတ်ခဲ့ဘူး ။
ဇနီး နဲ့ သားကို ပစ်ပယ်ထားပြီးမှ ချစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မျှမျှတတလေး ချစ်တတ်ရင်တော့ ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့ ။ အမေကို ချစ်တာဟာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် ဇနီး ကိုယ့်သားသမီးကို မျက်ကွယ်ပြုထားတာကတော့ သိပ်ကို ရက်စက်ရာ ရောက်သွားပြီ ။
ဒီလိုယောက်ျားမျိုးတွေကိုရတဲ့ မိန်းမတွေက များသောအားဖြင့် ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်ရတာများတယ် ။ အမေကို မချစ်နဲ့လို့ပြောပြန်ရင်လဲ ကိုယ်က လူဆိုးမကြီး ဖြစ်ဦးမယ် ။ ဒါပေမယ့် မိသားစုကို သိပ်ပြီး တွယ်တာတတ်ပြီး ကိုယ့်ဇနီးနဲ့ ကိုယ့်သားကို ပစ်ထားတာကျ ဘယ်သူမှ မမြင်တတ်ကြဘူးလေ ။
အဲ့လိုသားမျိုးကို ရထားတဲ့ အမေအတွက်တော့ သိပ်ကို ကောင်းတဲ့ ဆုလာဒ်ပါ .. ဒါပေမယ့် အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးကို ရထားတဲ့ မိန်းမအတွက်ကတော့ တကယ့်ကို ၀ဋ်ကြွေးပါပဲ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီလို ယောက်ျားမျိုးကို ရှောင်စေချင်တယ် ။